१९ दिन देखि श्रीमती र छोरी बेपत्ता ! कस्ले लग्यो यति राम्री श्रीमती र छोरी ? श्रीमान रुदै मिडियामा – " सुलभ खबर "
दाङको राप्ती गाउँपालिकाको सिंगेका मनोज चौधरीकी पत्नी ७ वर्षकी छोरी सहित सम्पर्कविहिन भएपछि श्रीमान अहिले रुँदै मिडियामा आएका छन् । ८ वर्ष अघि प्रेम विबाह गरेका मनोजकी पत्नी २९ वर्षकी सबना चौधरी ७ वर्षकी छोरी जिया सहित तिन साता देखि बेपत्ता छन् । ७ वर्षकी छोरीलाई विद्यालय पुर्याउन जान्छु भन्दै घरवाट निस्केकी उनी अझै घर फर्केकी छैनन् ।
घरबाट निस्किएको झण्डै एक महिना हुन लाग्दा पनि छोरी र श्रीमती नभेटिएपछि अहिले विनोद रुँदै मिडियामा आएका छन् । यस अघि पनि विवाह भइसकेकी सबनासंग प्रेम विवाह भएको उनले बताए । विवाह भइसकेकी सबनासंग फोनमा कुरा हुँदाहुँदै प्रेम बसेर विवाह प्रेम विवाह गरेको मनोजले बताए । उनले भने, सबनाको विवाह भइसकेको थियो तर फोनमा मलाई विवाह गर्न दबाब दिइन् । मलाई बिबाह नगरे देह त्याग गर्छु भनेर ध म्की दिएकाले विवाह गरे ।
विवाह पछि केही समय सम्बन्ध राम्रो रहेको भएपछि पछिल्लो समय सबना अन्य पुरुषसंग पनि सम्बन्ध बनाउन थालेपछि झगडा सुरु हुन थालेको उनले बताए । सबनाले घर छाडेर जानु अघिल्लो दिन पनि सोही विषयमा झगडा परेको थियो । अरुसंग सम्बन्ध छ भने मलाई छोडेर जा भनेर मैले भनेको थिएँ उनले भने, तर त्यो सुध्रिन्छेकी भनेर मात्र मैले त्यस्तो भनेको हो । तर मनै देखि गए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थिएन ।
आफुले निकै माया श्रीमतीलाई छोडर गए हुन्थ्यो भन्ने नलागेको उनको भनाई छ । तर सबना घर छोडेर गैसकेपछि भने उनका साथीहरुले सबनाको अन्य पुरुषसंग विवाह गरेर गएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । अन्य पुरुषसंग हिन्दीमा कुरा गर्ने गरेको पनि साथीहरुले सुनाएको उनले बताए । विश्वासघात गरेर गएको श्रीमती आफुसंग बस्न नचाहे पनि छोरी फिर्ता चाहेको उनको भनाई छ ।
उनले छोरी फर्काइ दिन आग्रह गरेका छन् । भिडियो मार्फत पनि मनोजले श्रीमतीलाई छोरी फर्काइदिन आग्रह गरेका छन् । मनोजका अनुसार सबिना परपुरुषहरुसँग पनि कुराकानी गर्ने र फेसबुकमा पनि लामो समय अन्य पुरुषहरुसँग बोलीरहे गरकेो हुँदा उनी अन्य पुरुषसँग गएको हुन सक्ने आशंका गर्छन् । आँखाभरी आँसु झादै भक्कानिएर मनोज भन्छन् मलाई मेरी मुटुको टुक्रा छोरी चाहिन्छ ।